गुल्मीका उम्मेदवारहरु गाउँ गाउँमा कसरी भोट माग्दै छन्? हेर्नुस् तस्बिरहरुमा – Gulminews
Home/फोटो फिचर/गुल्मीका उम्मेदवारहरु गाउँ गाउँमा कसरी भोट माग्दै छन्? हेर्नुस् तस्बिरहरुमा
गुल्मीका उम्मेदवारहरु गाउँ गाउँमा कसरी भोट माग्दै छन्? हेर्नुस् तस्बिरहरुमा
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ कार्तिक २३, बिहीबार २१:३७ मा प्रकाशित
गुल्मी, कात्तिक २२ । आउँदो मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि सबैजसो पार्टीका उम्मेदवार गाउँगाउँमा चुनावी अभियानमा ब्यस्त छन् । गुल्मीका दुबइ क्षेत्रका सबै उम्मेदवारहरु भोट माग्न गाउँगाउँमा पुगेका छन् । यतिबेला खेतीपाती स्याहार्ने समय भएको हुँदा धेरै जसो मतदाताहरु खेतबारीको काममा ब्यस्त छन् ।
उम्मेदवारले मतदाता घरमा नभेटाए खेतबारीमै गएर समेत भोट मागेका छन् । मतदाता भेटघाट र चुनावी सभा सबै नेताहरुले बडो ताम्झामका साथ गरिरहेका छन् । यपालिको चुनावमा फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सन्जालहरुको पनि राम्रै प्रयोग भएको छ । उम्मेदवारहरु र कार्यकर्ताहरुले सबै जसो चुनावी सभाहरुको फोटो र जानकारीहरु सामाजिक सन्जाल मार्फत बाँडिरहेका छन् । हेरौँ केही तस्बिरहरु: